The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
IMDB: 7.4/10 430,548 votes
Aidan Turner, Benedict Cumberbatch, Cate Blanchett, Dean O'Gorman, Graham McTavish, Ian McKellen, John Callen, Ken Stott, Martin Freeman, Richard Armitage
Nominated for 1 Oscar. Another7wins & 51 nominations.
ဇာတ်လမ်းကတော့ ဒုတိယ Hobbit ကား အပြီးကနေ ဆက်ထားပြီး၊ Smaug က Laketown ကို ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီး၊ Smaug ကိုလည်း Brad က Black Arrow သုံးပြီး ပစ်သတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ပဲ Brad က Laketown လူတွေရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ လူတွေကို Brad က ဦးဆောင်ပြီး တောင်ကြားထဲက ရွှေတွေကို သွားယူပြီး ဘဝအသစ်စဖို့ စီစဉ်ကြပါတယ်။
ဒုတိယ ကားမှာတုန်းက Thorin က တောင်ထဲက သူ့မြို့ ကိုပြန်သိမ်းဖို့အတွက် လက်နှက်နဲ့ လှေအကူအညီ ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးအောင်မြင်သွားရင် ရွှေတစ်ချို့ကို လူတွေကို ခွဲပေးမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တမ်းမှာတော့ Thorin က သူ့ အဖိုးလို ပဲ လောဘတက်ပြီး စိတ်ဖောက်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်သူကိုမှ လည်း ပေးမဝင်တော့သလို ရွှေတွေကိုပဲ ဖွက်ဖို့လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။
Smaug(နဂါး) သေသွားပြီဆိုတာ သိလိုက်ရတဲ့ Elf နဲ့ အခြား Dwarf တွေအပြင် Orc တွေကလည်း တောင်ထဲက Dwarf မြို့ကိုသိမ်းဖို့ ချီတက်လာနေကြပါပြီ။Orc တွေက ရွှေငွေတွေကို လိုချင်လို့ ချီတက်လာတာမဟုတ်ပဲ၊
ဒီတောင်ကြား က စစ်ရေးအရ အရေးပါတာကြောင့်သိမ်းချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမြို့ကို Orc တွေသိမ်းသွားရင်၊ Elf တွေရဲ့ မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ Rivendell တို့ လူတွေရဲ့ အကြီးဆုံး မြို့ ဖြစ်တဲ့Gondor မြို့ တို့ကို တိုက်ရိုက် ချီတက်
သိမ်းလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို Man, Elf နဲ့ Dwarf တွေ အားလုံးပေါင်းပြီး ခုခံဖို့ Gandalf ကပြောပေမယ့် Thorin ကြောင့် အချင်းချင်း စစ်ဖြစ်ကြ ဖို့တာဆူနေကြပါတယ်။
ဒီကားက ဟာကွက်တွေများပေမယ့်လည်း မိသားစုတူတူ ကြည့်လို့ကောင်းပြီး၊ Action ကောင်းကောင်းတွေပါပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းစပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ စစ်ပွဲတွေထဲကိုတန်း ရောက်သွားတာကြောင့် ဇာတ်လမ်း ပိုင်းမှာ
အားနည်းသွားပေမယ့် Action/Adventure ပရိတ်သတ်တွေအတွက်ကတော့ စိတ်ကြေနပ်မှုရစေမှာပါ။မိသားစုတူတူကြည့်နိုင်ပြီး။
No Sex, No Nudity ဖြစ်ပြီး။ ဒီကားထဲမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ Dual တွေ တော်တော်များများပါတာကြောင့် လည်းလူတွေ အကြိုက်တွေ့စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်အညွန်းကို #Sololay ရုပ်ရှင်မိတ်မှ ကိုးကားပါသည်..။
Andy Serkis Carolynne Cunningham Peter Jackson
Aidan Turner Benedict Cumberbatch Cate Blanchett Dean O'Gorman Graham McTavish Ian McKellen John Callen Ken Stott Martin Freeman Richard Armitage
Option 1 megaup.net 790 MB SD (480p)
Option2drive.google.com 790 MB SD (480p)
Option3cloud.msubmovie.com 790 MB SD (480p)
Option4drive.google.com 1.7 GB HD
Option5megaup.net 1.7 GB HD
Option6cloud.msubmovie.com 1.7 GB HD
Option7cloud.msubmovie.com4GB FHD DTS 5.1
Option 8 megaup.net4GB FHD DTS 5.1
Option9drive.google.com4GB FHD DTS 5.1